Akwụkwọ Ellen Dunnigan na Martech Zone |
Edemede site na Ellen Dunnigan
Ndị dọkịta na-awa ahụ ji uche na-akwado maka ịwa ahụ. Ndị na-agba ọsọ na-ejikere ejikere maka nnukwu egwuregwu. Gị onwe gị, mkpa ka psyched banyere gị ọzọ ohere, gị nnukwu ahịa oku ma ọ bụ ngosi ma. Zụlite nkà nkwurịta okwu dị ukwuu ga-eme ka ị pụọ iche na ngwugwu ndị ọzọ. Chee echiche banyere nkà ndị ị chọrọ: Usoro Nlekọta Ndị Nlekọta - you maara n'ezie ihe onye ahịa gị chọrọ na ihe kpatara ya? Gịnị bụ ihe mgbu ya? Nwere ike ịnụ ya n'ihe ọ na-ekwu